Izibonelelo zeSicwangciso esiBalaseleyo seNtengiso | Martech Zone
Izibonelelo zeCebo eliKhulu lokuThengisa uMxholo
NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 Douglas Karr
Kutheni le nto imfuneko ukuthengisa umxholo? Lo ngumbuzo abantu abaninzi kolu shishino abawuphenduli kakuhle. Iinkampani kufuneka zibe nesicwangciso esomeleleyo somxholo kuba uninzi lwenkqubo yokwenza izigqibo yokuthenga itshintshile, enkosi kumajelo eendaba akwi-Intanethi, ngaphambi kokuba ithemba lifikelele kwifowuni, impuku, okanye umnyango wangaphambili kumashishini ethu.
Ukuze sibe nefuthe kwisigqibo sokuthenga, kunyanzelekile ukuba siqinisekise ukuba uphawu lwethu lukhona, sichongiwe njengesisombululo, kwaye inkampani yethu ibonwa njengegunya. Ukuba umxholo olungileyo ukho ngexesha elifanelekileyo kunye nomyalezo olungileyo, sinokwakha ukuthembana kwangoko kumjikelo wokuthenga kwaye senze uluhlu olufutshane lweenkampani onokukhetha kuzo.
Amashishini avela kumashishini ahlukeneyo kwiindawo zombini ze-B2B kunye ne-B2C axhomekeke kwiintlobo ezahlukeneyo zomxholo kunye neendlela zokuthengisa umxholo. Imithombo yeendaba kwezentlalo, amanqaku, iincwadana zeendaba kunye neebhlog zihlala kumaqhinga aphezulu okuthengisa asetyenziswe ngamashishini amaninzi njengoko kubonisiwe kwitshathi engentla. Ezinye iifom zomxholo nazo ziyafumana umhlaba kunye nokuthandwa phakathi kwabathengisi kubandakanya infographics kunye nevidiyo phakathi kwabanye. UJomer Gregorio, ukuThengiswa kweDijithali yeCJG
I-8 ye-Hard-to-Ignore Izibonelelo zoThengiso loMxholo
Ukuthengisa umxholo kuvelisa ngakumbi Ukuhamba kweendlela kwindawo yakho.
Ukuthengisa umxholo kuyanda uthethathethwano nabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Umxholo wentengiso uvelisa izikhokelo ezingaphezulu.
Ukuthengiswa kokuqukethwe kwandisa ukuthengisa.
Ukuthengisa umxholo kuyakha ukuthandwa kwekhonkco lendalo.
Ukuthengisa umxholo kuyakha Ulwaziso lwebrand.
Umxholo wentengiso ukumisela njenge inkokeli yokucinga.
Ukuthengisa umxholo ngu ephantsi kuneendlela zesiko zentengiso.
Hmmm… eyokugqibela ifuna ukulungiswa. Ngelixa ukuthengisa umxholo kunokuba kubiza kancinci ekuhambeni kwexesha, kufuna umzamo omkhulu kunye nomfutho wokukhulisa abaphulaphuli obadingayo, ukumisela igunya olifunayo, kwaye uqalise ukuqhuba ukukhokelela. Andizukuncama kolunye utyalomali lokuthengisa kude kufike umkhondo!
tags: abaphulaphuliiinzuzoIzibonelelo zentengiso yomxholoUlwaziso lwebrandukwakha amakhonkcoukuthengisa okungabizi kakhulucjg intengiso yedijithaliUkuThengiswa kweMpahlaumxholo wentengisoNxaxhebaukuvelisa izikhokeloUkuhamba kweendlelaJomer gregorioqhagamshela ukuthandwainkokeli yokucingaubunkokeli bokucingaukuthengisa ngokwesiko
Imithombo yeendaba ehlawulweyo, eyeNkampani kunye neNkxaso: Inkcazo, abaphulaphuli kunye neempawu
Ngaba Uyahlangabezana noMlindelo wokuThengwa kwabaThengi kulo nyaka?